Zvikoro Zvovhurwa Vasina Kubhadhara Vachidzingwa Ukuwo Vadzidzisi Vachinyunyuta
Chivabvu 10, 2011
Vana vakawanda vasina kubhadhgarirwa mari yedzidzo vadzorwa neChipiri muzvikoro zvakawanda munyika. Vanga vachidzorwa vanosanganisira vanodzidza vachigara pazvikoro pamwe nevanodzidza vachibva kudzimba dzavo vasina kunge vakabhadharirwa mari dzedzidzo.
Zvinonzi muzvikoro zvine fenzi yakazvipoteredza, vana vechikoro vanga vachidzorwa vasvika pamagedhi. Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi revabereki panyaya iyi, kanawo vakuru vezvikoro.
Asi gurukota rezvedzidzo, VaDavid Coltart, vanoti hapana mwana wechikoro anofanirwa kudzorerwa mari dzedzidzo.
Asi munyori mukuru we Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Va Raymond Majongwe, vanoti zviri kutaurwa naVaColtart handi chokwadi nekuti muZimbabwe mune mutemo wekuti vana vose vasina kubhadhara mari yedzidzo kana vasina yufomu vadzoserwe kumba. Va Majongwe vanoti hachisi chinhu chakanaka kudzinga vana vanenge vasina kubhadharirwa mari yedzidzo.
Zvikoro zvavhurwa pane kunyunyuta kukuru muvadzidzisi, zvikuru vekumaruwa vari kuti mhirizhonga ichiri kuvatambudza zvichitevera chirongwa che ZANU-PF chaivamanikidza kuti vasaine gwaro rekuramba zvirango zvakatemerwa mutungamiriri we nyika, Va Robert Mugabe, pamwe nevamwe vavo mu ZANU-PF.
Masangano anomirira vadzidzisi e Progress Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, ne Teachers Union of Zimbabwe, TUZ, anoti pane kutsutsumwa kukuru mukati mevadzidzisi pamusoro pemari dzemihoro yavari kutambiriswa. Masangano aya anoti haasi kufarawo nemashandiro avari kuita
Mutungamiri wePTUZ, VaTakavafira Zhou, vaudza Studio7 kuti vadzidzisi vari kuteverwa nevanhu vavasingazive, izvo zviri kuvatyisa.
Vatizve vadzidzisi vachange vachiramba mabasa kana vakasawedzerwa mari dzavo dzemihoro mwedzi unouya sezvavakavimbiswa naVaMugabe.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi rerimwe sangano re Zimbabwe Teachers Association. Asi mutungamiriri we Teachers Union of Zimbabwe, Va Emmanuel Nyawo, vanoti hurumende yatadza zvachose kugadzirisa zvichemo zvevadzidzisi zvekuti kuramwa mabasa ndicho chinhu chavachaita.
Hurukuro naVa Emmanuel Nyawo